Igumbi leMerlot elinemibono yesithili sewayini.
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguPago
“I-Pago de Trascasas” yiHotele yaseRural yokurenta amagumbi, enenkonzo yokutyela kunye neentlobo ngeentlobo zemisebenzi, egxile ikakhulu kuKhenketho lweWayini.
Ngesitayile esisulungekileyo saseCastilian, inamagumbi asi-8 anegumbi lokuhlambela lawo, igumbi lokufunda elinikezelwe ikakhulu kwi-viticulture, igumbi lokuhlala, indawo yokutyela egxile ekuncanciseni itakane elosiweyo kwi-adobe kunye nee-oveni zodongwe, ukutya kwesintu kunye nezimuncumuncu zasekhaya.
Itholakala eCubillas de Santa Marta, idolophu encinci kwaye ezolileyo kwingingqi yeCigales, entliziyweni yale Denomination of Origin, kwindawo ye "Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría", ezinye zazo zifumaneka kwiindwendwe.
Eli gumbi elibizwa ngokuba yi "Merlot" liphindwe kabini kunye neebhedi ezi-2 ze-90 cm, iTV yeplasma, iziteshi zedijithali. Bakwanayo nebathroom yabo kunye nekholamu ye-hydromassage kunye nokufudumeza.
Ukhenketho lwemveli lwembali kunye nenkcubeko lunokwenzeka ecaleni kweRibera del Pisuerga, iCanal de Castilla, iMontes Torozos kunye needolophu ezingabamelwane.
Umbuki zindwendwe ngu- Pago
Kwaye igumbi elilungelelanisiweyo njengendawo yokungcamla okanye yokuhlangana. Indawo efanelekileyo yokusebenza edityaniswe nemisebenzi yokuzonwabisa, ukuzola nokuphumla.